Banyere Anyị - Sichuan Aixiang Technology Co., Ltd.
Banyere Luxo tent
Sichuan Aixiang Technology Co., Ltd. bụ ọkachamara nke ìhè-ibu ụkpụrụ ụlọ Ọdịdị na China, na abụọ ụdị, Aixiang Agriculture na Luxo Tent n'okpuru ya aha.
The ụlọ ọrụ dị na Chengdu, n'elu aluminum tent emeputa na ahịa nkwonkwo ụlọ ọrụ na Western China.
Anyị na-arụ imewe & mepụtara onye-nkwụsị ngo ikpe ọrụ, na ngwaahịa na mgbe-ọrụ na-ghọtara site n'ebe ọ bụla esenidụt & anụ ụlọ ahịa. Anyị 're raara nye ukwuu ahaziri aghụghọ na ahaziri glamping tent, okomoko eme tent, na hotel tent maka mara mma agbaga ebe, njem ezigbo ala, ebe obibi ntụrụndụ isi nri ụlọ ọrụ, gburugburu ebe obibi imewe atụmatụ na ndị ọzọ mkpa nkeji.
Anyị nwere ọtụtụ nhọrọ nke ụlọ ịgba egwu, ọdụ data ụlọikwuu maka nhọrọ gị.
Maka ndị ahịa na-achọ imepụta ụdị omenala ọzọ, anyị nwere ike ịnye ọrụ ahaziri-arụ ọrụ dị elu.
Anyị na-enye ọtụtụ ọrụ dị iche iche site na atụmatụ echiche gaa na mmejupụta mmezu ụlọ akụrụngwa.
Turn-key Ngwọta n'ihi Light-arọ Architectural Structure
The ụlọ ọrụ nwere oge a mmepụta akụrụngwa, ike nnyocha & development ike na-ewu, ọrụ otu na jikọtara na afọ nke teknuzu ahụmahụ. Anyị na-enye imewe, mepụtara, echichi, na mmezi ọrụ niile ụdị aluminum alloy na ìhè-ibu ígwè etiti owuwu.
The Engineering and Technology Department ugbu a nwere ihe abụọ constructors PRC Certified mbụ na klas, atọ constructors PRC Certified abụọ na klas, asaa agadi-emepụta na iri na isi ahịa, bụ ndị na ha na-arụ karịrị 5 afọ na ike inye ọkachamara ngwaahịa imewe na oru ngo ngwọta ahịa ngwa ngwa na rụọ ọrụ nke ọma
Anyị Ụkpụrụ: ekele, n'eziokwu, ọkachamara, omiiko, ngalaba-ịkpa
Luxo Tent esetịpụ azụmahịa na nkà ihe ọmụma na ike n'ezi ihe dị ka mgbọrọgwụ, àgwà na-abịa mbụ, onwe-ndabere ọhụrụ na ọhụrụ àgwà imaatu ọ bụla zuru ezu nke ọrụ, na-enye na-eri-irè ngwaahịa na ọrụ ndị ahịa n'ụlọ na mba ọzọ na anyị ọhụrụ àgwà.
Anyị agaghị na-na nye a larịị nke ọrụ na-eme ka ndị ahịa anyị na-eche dị eze. Ọ bụ mgbe obi ụtọ nabata anyị osisi maka ọrụ-site nchoputa, nabata iwu a azụmahịa-ibe mmekọrịta anyị.
Safari Tent Hotel , Okomoko Safari Tent, Cotton Kanvas Bell Tent , Tlọ nkwari akụ, Safari Tent , N'èzí Tent .